टेक्नोलोजी | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
काउन्टरटप निर्मित वाशिंग मेशीन (फोटो)
सानो आकारको अपार्टमेन्टको सर्तमा, घरेलू उपकरणको प्लेसमेन्टको सम्बन्धमा असुविधाहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले खाना पकाउनको लागि प्रयोग नभएका विभिन्न वस्तुहरू किचन सेटको डिजाईनमा समावेश हुन्छन्। विशेष गरी, धुने ...
नोकिया C7: फोन र समीक्षाको विशेषताहरू
"नोकिया C7 00", जसको विशेषताहरु यस लेखमा विश्लेषण गरिनेछ, केवल "नोकिया C7" प्रयोगकर्ताहरू द्वारा भनिन्छ। यो स्मार्टफोनलाई नोकिया उपकरणहरूको लाइनमा एक विशेष स्थान दिइयो। वास्तवमा यो दोस्रो स्मार्टफोन हो ...
फोन "नोकिया लुमिया 530०": समीक्षा, विशिष्टताहरू
प्रकाशित 15.09.2019 23.12.2019
नोकिया लूमिया लाइनका फोनहरू रूसमा सबैभन्दा लोकप्रिय छन्। रूसी संघका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्सका फ्यानहरूले फिनिशलाई आदर गर्छन् (भर्खरै - डे ज्युर अमेरिकन - वास्तवमा यससँग एउटा राम्रा सम्झौताको रूपमा ...
MTS 982 स्मार्टफोन: समीक्षा, मालिक समीक्षा र फोन विशिष्टताहरू
प्रकाशित 15.09.2019 19.08.2019
२०१ 2014 मा, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले पहिले नै मन परेको परम्परा अनुसार, यो एक आकर्षक मूल्यमा एक अपरेटरबाट एक टचस्क्रिन स्मार्टफोन किन्न सम्भव थियो। यस पटक हामीलाई MTS 982 मोडेल प्रस्ताव गरिएको थियो। यसको लागत ...
"Nokia X6": विशिष्टताहरू, निर्देशनहरू, फोटोहरू
आधुनिक संसारमा बसोबास गर्दै, मोबाइल फोनको रूपमा त्यस्तो सामान्य कुराको बिना नै कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। हामीलाई यसको आवश्यकता काम, अध्ययन, प्रियजनहरूसँग सञ्चार, र केवल रमाइलोको लागि हो।
MTS Sberbank बाट "धन्यवाद" बोनसको साथ भुक्तानी। MTS Sberbank बाट "धन्यवाद" बोनससँग कसरी भुक्तानी गर्ने?
हाल, MTS संस्थाले धेरै कार्यालयहरूलाई सहयोग गर्दछ, जसमध्ये एक Sberbank हो। यो नोट गरिनु पर्छ कि उनीहरूसँग धेरै संख्यामा साझा सेवाहरू छन्, उदाहरणका लागि, "बोनसको साथ एमटीएसको लागि भुक्तानी" बाट धन्यबाद ...
उडान 4416 XNUMX१XNUMX फोन - विशिष्टताहरू
फ्लाई मोबाइल फोन मोडेलहरू अन्य प्रतिस्पर्धी उपकरणहरू भन्दा कम सामान्य छन्, तर तिनीहरूको पनि धेरै फाइदाहरू छन्। यस मोडेल दायराको एक मात्र दोष शान्त इयरपीस हो। यद्यपि यो केवल प्रासंगिक मात्र हो ...
फ्रन्ट क्यामेरा - यो के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
आज, स्मार्टफोन निर्माताहरूले आफ्ना उपकरणहरूमा नयाँ मोड्युलहरू र हार्डवेयर सुविधाहरू थप्दै एक अर्कालाई मद्दत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। Years बर्ष भन्दा बढीको लागि, फ्रन्ट-फेसिंग क्यामेरा मोबाइल बजारमा परिचित छ। पहिले…
सब भन्दा मौन धुने मेसिन: छनौट गर्नुहोस्
धेरै दिनहरू गए जब धुने प्रक्रियाले गृहिनीहरूलाई ठूलो समस्या प्रदान गर्‍यो। रातको लागि विशाल पानाहरू र डुभेट कभरहरू भिजाउन, वा तपाईंको हातको छाला रगतको दाँतमा च्यात्न अब कुनै आवश्यकता पर्दैन।
डायोड ब्रिज भनेको के हो?
आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्समा आधारभूत तत्वहरू मध्ये एक डायोड हो। यो सर्किटहरूमा प्रयोग गरीन्छ जहाँ AC सुधार आवश्यक छ, र लगभग सबै घरेलु उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईं टिभीमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ, ...
कसरी एक राम्रो क्यामेरा र ब्याट्री (समीक्षा) को साथ ट्याब्लेट छनौट गर्ने।
आधुनिक मोबाइल उपकरणहरूको दायरा यति विस्तृत छ कि वास्तवमा छनौट गर्न यत्ति सजिलो छैन। त्यहाँ धेरै मोडेलहरू छन् जुन मूल्य, निर्माता, टेक्निकल सुविधाहरूमा फरक छन्। पनि गर्नुहोस् ...
गुडलाइन: समीक्षा। मोबाइल जडान
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि विदेशमा कल गर्ने रोमि mode मोडमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसको मतलब यो हो कि ग्राहकले आफूलाई चाहिने नम्बरसँग कुराकानी गर्न, सेवाहरू प्रयोग गर्दछ उसको अपरेटरको होइन, तर विदेशी कम्पनीको (मार्फत ...
माइक्रोवेभ संवाहन: यो के हो? कन्भक्शन र ग्रिल माइक्रोवेव
प्रकाशित 15.09.2019 14.10.2019
यदि तपाइँ नयाँको लागि तपाइँको पुरानो माइक्रोवेभ ओभन एक्सचेन्ज गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, मोडेलहरूको विविधता आज तपाइँलाई सुखद रूपमा आश्चर्यचकित गर्नेछ। संवहनको साथ माइक्रोवेभ ओभनहरू हाल सबैभन्दा व्यापक छन् (केवल तिनीहरूको बारेमा समीक्षा ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 37 अर्को पाना
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 31,023 प्रश्नहरू।